Ubuntu 18.04 LTS systemd ichaenderana zvizere neDebian | Linux Vakapindwa muropa
Martin Pitt nechikwata chake chevagadziri vanozogadzirisa kuenzanisa kweiyo systemd Ubuntu 18.04 LTS kuitira kuti chirongwa cheCanonical uye Debian zvinyatsoenderana uye yekutanga haidi mamaki akasarudzika kana mamwe maratidziro, asi ichavandudzwa sezvinoita Debian. Izvi zvirokwazvo zvinopa hutano kune ese mapurojekiti, uye gadziriso yekuvandudza ichave Debian Kwidziridzo yeese masisitimu.
Martin Pitt ane basa rekuchengetedza systemd paUbuntu mukati memwedzi mishoma yekupedzisira yekusimudzira. Uye yakashanda zvakanyanya kubvisa chikwereti chekare chehunyanzvi icho Ubuntu chaifanira kushandisa iyo nyowani systemd muCanonical inoshanda sisitimu. Asi chinhu chinonyanya kufadza chave chiri chiziviso chaakaita kubudikidza neakaundi yake yemagariro network Google+ uye kuti ichauya muna 2018, ine vhezheni yeUbuntu yataurwa pamusoro.
Martin Pitt anovimbisa kuti shanduko dzavachaita uye dzinozoonekwa muUbuntu 18.04 LTS kekutanga, ichaita iyo Ubuntu neDebian systemd masystem akanyatsoenderana uye hapana chikonzero chekugadzira zvigamba kana zvigadziriso yeUbuntu, ichigadzira iyo nyowani vhezheni ichazoburitswa mune ramangwana kusvetuka kukuru kuri kuitika kweshanduro dzese dzinoonekwa kusvika parinhasi. Tichiri kumirira nhau munguva pfupi uye kusangana uko kweCanonical kwativimbisa.
Mune mawonero angu, ini ndagara ndazvitaura uye ndicharamba ndichizvitaura, kuva nezviuru zvemadistros zvisina kunaka, zvinoita kuti vanogadzira vaparadzire kuedza kwavo muzvirongwa zvakasiyana kwazvo. Handisi kuti Linux inova FreeBSD kana yakafanana, iine system imwe chete, asi pamwe nema distros mashoma uye mapurojekiti zvinogona kuita kuti ugutse vashandisi vakasiyana uye tarisa kuedza pane imwe nzvimbo yepakati. Kubatana isimba, haudaro here? Misiyano yakanaka, asi kwete zvakanyanya ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu 18.04 LTS systemd ichaenderana zvizere neDebian
Ndiri kunzwa ramangwana rakanaka. Mutsva mutsva, LTS nyowani, docker uye ikozvino mune 2 makore projekiti syncing. Pasina mubvunzo idzi mbiri dzichabatsirana uye kunyanya zvakatorwa zvakatwasuka seMint neElemantary.
Iwe unoda kukosheswa muiyo gnu / linux system, yakawanda yemahara software software inofanira kugadzirwa inopfuura iyo isiri yemahara uye kushambadza aya maapplication kuitira kuti vazivikanwe uye vamiswe kana paine zviyero zvekushandisa, iwe uchaona kuisirwa
Kana zviri zve debian ne ubuntu, zvinodaidza kutarisisa kwangu, isu tinofanirwa kumirira iyo vhezheni kuti isvike kuti tione zvinoitika.
Ini ndinoshamisika kana tichigona kumisikidza kubatana desktop pane debian nyore kana iyo sync ikabudirira?
Ko hama dzinotaurazve?
Kutamba padivi, izvi zvinobatsira kwazvo huwandu hukuru hwevanhu idzo mbiri Debian neayo 'forogo' Ubuntu inoputira.
Ndiri kutarisira kuona mashandiro euyo maneja webasa? -kuwedzera kugadzirisa, zvirinani !! Idya iyo Wi… Yakapfava Priv.